दुई सय ऋणले एक वर्ष जेल ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV दुई सय ऋणले एक वर्ष जेल ! | Sagarmatha TV
धनुषाका एक दलितले महाजनलाई दुई सय ऋण चुकाउन नसक्दा आइतबार एक वर्षको लागि जेल चलान गरिएको छ ।
‘२ सय रुपैयाँ नतिरेको कारण जेल जानु परेको पहिलो घटना होला । दलितमाथिको अन्याय कहिले अन्त्य होला ।’ कुशेश्वर मेस्तरले भने । पत्रकार महासंघ धनुषाको विद्यापति चौकस्थित कार्यालयमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी खंगले आफू आत्मसमर्पण गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए –
‘प्रहरी पटक पटक घरमा जान्छ । परिवारका महिला पुरुषलाई धम्काउँछ । घर परिवारका सदस्यहरुलाई दुख दिनुको सट्टा जेलमै बस्छु ।’ खंग भनेका थिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।